Antananarivo Renivohitra : Feno lavadavaka sahady ny arabe -
AccueilSongandinaAntananarivo Renivohitra : Feno lavadavaka sahady ny arabe
Antananarivo Renivohitra : Feno lavadavaka sahady ny arabe
Aiza ny minisitera misahana ny fikojakojana ny lalana eto an-drenivohitra ? Raha ny hita manerana ity renivohitra ity, dia tsy manao ny asany mihitsy io minisitera io fa variana amina zavatra hafa angamba. Satria tokoa dia saika feno lavadavaka avokoa ny arabe rehetra eto an-dRenivohitra toy ny etsy amin’ny fiolahana miakatra ho any Ambatobe raha avy any Nanisana.
Raha sendra tratra hariva eo, dia sahirana vao afaka amin’izany lalana izany ny fiara. Manome vahana ny asan-jiolahy ny fahapotehan’ny lalana toa itony, satria dia tsy ho afaka handeha mafy mihitsy ny fiara rehefa tonga eo amin’ilay lalan-dratsy.
Tsy ny eny Nanisana ihany no feno lavadavaka fa faritra maro eto an-drenivohitra.
Isan-kerinandro dia lany andro manamboatra “train avant”-n’ny fiarany ny ankamaroan’ny mpampiasa lalana.
Miteraka fahasorenana ho an’ny mpampiasa fiara sy ny mpampiasa lalana ny tranga tahaka izao. Manginy fotsiny ny fitohanana aterak’ilay lalan-dratsy. Mora ny manome tsiny ny fitondram-panjakana amin’ny toe-javatra tahaka itony. Vitsy ny olona no mahatakatra fa ilay minisitra tompon’andraikitra no tsy nanao ny asany, fa ny ankamaroan’ny olona dia manao anaty kitapo iray ny fitondram-panjakana iray manontolo. Fotoana izao tokony handraisana fepetra amin’ny minisitra be vinany sy manao izay hankahalan’ny olona ny fitondram-panjakana iray manontolo.
Fandaharan’asa FEC : Afa-panadianana i Madagasikara